Liverpool Oo Dalab Ka Gudbineysa Saul Niguez – Garsoore Sports
Liverpool Oo Dalab…
Liverpool Oo Dalab Ka Gudbineysa Saul Niguez
Liverpool ayaa la rumeysan yahay inay diyaarinayso dalab ku dhow 40 milyan oo ginni ah oo ay ku dooneyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee Atletico Madrid Saul Niguez, iyadoo kooxda reer Spain iyo ciyaaryahanka ay u furan yihiin inay kala wareegaan.
Waxaa si fiican loo xusay in Reds ay u baahan tahay xoojin xoog leh oo bartamaha khadka-dhexe ah xagaagan kaddib bixitaankii Georginio Wijnaldum.
Waxaa jiray warar qaar oo sheegaya in aysan dooneeynin beddelka Giorginio taa beddelkeedana ay gudaha ka horumariyaan kooxda laakiin guuxa ka imanaya Anfield ayaa soo jeedinaya inay raadinayaan inay soo xero geliyaan ciyaaryahan cusub oo khadka dhexe ah waxaana ay xiiseeynayaan Saul Niguez oo Atletico Madrid u cayaara.
Warka xiisaha Liverpool ayaa markii ugu horaysay ka soo baxay Spain bilowgii todobaadkan, iyada oo wargeyska La Razon si aan mugdi ku jirin u sheegay in Liverpool ay eegayso Saul, isla markaana Atleti ay diyaar u tahay inay la hadasho.
Laakiin sheekada waxaa hada talaabo dheeri ah u qaadday AS, oo sheeganeysa in Liverpool ay haatan ‘diyaarinayso dalab’ 40 milyan oo ginni ah oo ay ku dooneyso 26 jirkaan.
Sambi Lokonga Oo Maanta Caafimaadka U Maraya Arsenal
Garsooraha Dhexdhexaadin Doonan Kulanka Ingiriiska & Talyaaniga Oo La Shaaciyay